एक हप्ता अघि युएईमा मृ’त भेटिएका डोटेलको श’व कुर्दै पत्नी र छोरी ! – Khabarhouse
एक हप्ता अघि युएईमा मृ’त भेटिएका डोटेलको श’व कुर्दै पत्नी र छोरी !
Khabar house | २७ चैत्र २०७६, बिहीबार ०२:५७ | Comments
काठमाडौं : को;रोना भाइरसका कारण यतिवेला विश्वमा महामारी फैलिएको छ। को;रोना भाइरस संक्रमणको प्रभावमा रहेका धेरै देशहरुले आन्तरिक तथा वाह्य उडान रोकेका छन् भने आफ्ना देशका सीमा नाकाहरु समेत सिल गरेका छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान रोकेको छ । अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन भन्दै सरकारले लकडाउन गरेको छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकले को;रोना संक्रमणको त्रासका कारण लकडाउन गरिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली समेत विदेशी भूमिमा नै रोकिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीकालागि गएका देशले स्वदेश फर्कन अनुमति दिएको भए पनि नेपालमा उडान रोकिनु र देशमा लागेको लकडाउनका कारण नेपालीहरु विदेशी भूमिमा नै रोकिएका छन् । लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका छन् ।
श’वसमेत उतै रोकियो : वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा रहेको अवस्थामा ज्या’न गु’माएकाको परिवारको अवस्था त झन् यतिबेला निकै पीडादायी बनेको छ। विदेशी भूमिमा ज्या’न गुमाएका आफन्तको श’व समेत ल्याउने वाता वरण को;रोना भा’इरसका कारण रोकिएको अवस्थामा छ । खाडी मुलुक यूएईमा कार्यरत नुवाकोट बेलकोटगढी–१२ का ३५ वर्षीय हरिशरण डोटेलले एक हप्ता अघि ज्या’न गुमाए ।
तर उनको श’व तत्काल नेपाल ल्याउने अवस्था रहेको छैन । को;रोना भाइरसका कारण उनको श’व नेपाल ल्याउन प्रकृया समेत अघि बढ्न सकेको छैन । विदेशमा रहेका राजदूतावासले यति बेला अत्यावश्यक सेवा फोनबाट समाधान गरिरहेका छन् । नेपालमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको पनि नियमित सेवा बन्द रहेको छ । उसले विदेशमा ज्यान गुमाएकाको श’व ल्याउने बाहेकका अन्य काम रोकेको छ ।
तर डोटेलको श’व ल्याउने प्रकृया समेत शुरु हुन सकेको छैन । आबुधावीस्थित बेभर्ली हिल्स मेडिकल सेन्टरमा कार्यरत डोटेल एक हप्ताअघि आफ्नै कोठामा मृ’त भेटिएका थिए। आइतबार आफ्नै कोठामा झु’ण्डिएको अवस्थामा मृ’त भेटिएका डोटेलको मृ’त्युबारे गएको सोमबार दूतावासमा जानकारी आएपछि दूतावासले कम्पनीमा सम्पर्क गरेको थियो ।
कम्पनीको निवास छोडेर बाहिर बस्दै आएका हरिशरण काममा लगातार दुई दिनसम्म नआएको भन्दै कम्पनीले खोजी गरिरहेको जनाएको थियो । दूतावासका अनुसार कोठामा झु’न्डिएर आ’त्म ह;त्या गरेको भन्दै सँगै बस्दै आएकी नुवाकोट कै एक महिला र अन्य दुई पुरुष दूतावासमा पुगेका थिए । मृ’त्यु शं’कास्पद भएको परिवारले दाबी गर्दै आएको छ ।
अनुसन्धानका लागि भन्दै हरिशरणसँग बस्दै आएकी महिलालाई स्थानीय प्रशासनले प’क्राउ गरेको छ । उनले आ’त्म ह;त्या गरेको भन्दै दूतावासमा उनीसँगै बस्दै आएका व्यक्ति पुगेको भएपनि परिवारका सदस्य भने उनको ह;त्या भएको आशंका गर्छन् । तर को रोना भा’इरसको म’हामारीका बीच पो’स्ट मा’र्टम रिपोर्ट आउन समेत सकेको छैन ।
आफूहरुले छानविनको माग गरेको भएपनि अहिलेको अवस्थामा त्यो अघि बढ्न नसकेको हरिशरणका भतिज अश्विन डोटेलले बताए । आफ्ना काका कमजोर मानसिकता भएको व्यक्ति नभएको भन्दै उनले आ’त्म ह’त्या गरेको कुरामा विश्वास गर्न नसकिने बताए ।
उनले श’व ल्याउन कति समय लाग्छ भन्ने थाह नभएको बताए । गत मंसिरमा १५ दिनको छुट्टीमा आएर हरिशरण फर्किएका थिए ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा छोरो गुमाएका उनले १३ वर्षको उमेरमा नै बुवालाई गु’माएका थिए । त्यस्तै उनले केही वर्ष पहिला दाजुलाई गु’माएका थिए । उनकी श्रीमती र १४ वर्षीया छोरी अहिले नुवाकोटमा छन्। विदेशी भूमिमा ज्या’न गु’माएका पति र बुवाको श’व समेत समयमै सद्गत गर्न नपाएपछि उनीहरुको पी’डा कम छैन । विदेशी भूमिमा पति र बुवा गु’माउनु परेको पी’डामा डोटेल परिवारलाई को;रोना भाइरसले थप पी’डा दिएको छ ।